Ama-incubator e-CO2 asetshenziswa kakhulu ocwaningweni lwesayensi ukuze kukhule futhi kugcinwe amasiko amaseli.Inkampani Heal Force CO2I-incubator ikunikeza ukulingiswa kwemvelo okungenakuqhathaniswa ukuze uqinisekise izimo zokukhula ezifanele zesiko lakho ngaso sonke isikhathi.Kungakho beba ukukhetha kokuqala kwabacwaningi emikhakheni yokusetshenziswa okubandakanya ubunjiniyela bezicubu, ukuvundiswa kwe-in vitro, i-neuroscience, ucwaningo lomdlavuza nolunye ucwaningo lwamaseli ezincelisayo.
Ukutshalwa kwamangqamuzana ikakhulukazi kuyinqubo ebucayi kakhulu lapho amagciwane, amagciwane, ama-fungal spores kanyeama-mycoplasma angacekela phansi amasiko abalulekile noma ahlanekezele imiphumela yokuhlolwa, abangele umsebenzi owengeziwe.I-Heal Force iyaxazululale nkinga isebenzisa umklamo oyingqayizivele kanye nendlela ephumelelayo yokuqinisekisa izimo eziyinyumba.
90 ℃ ukushisa okumanzi kokubulala amagciwane (HF90 & HF240)
I-HF90 ne-HF240 ifakwe isistimu yokushisa emanzi engu-90 ℃.Umjikelezo wokuvala inzalo ebusuku oqinisekisiwe uqinisekisa ukubhujiswa okuthembekile kwamagciwane angase aphazamise umsebenzi wakho futhi awudingi umsebenzi owengeziwe, njengokususwa kwezinto ezifakwa ngaphakathi.I-Mycoplasma iqedwa ngo-100% emjikelezweni wokubulala amagciwane.
I-Ultraviolet disinfection (HF151UV & HF212UV)
Isibani se-ultraviolet yempilo ende sifakwe ngemuva kwangaphakathi kwe-HF151UV ne-HF212UV ukuze kucolise umoya wegumbi namanzi endaweni yokugcina amanzi ukuze kugcinwe izimo ezingenakungcola ngaphakathi kwegumbi.Ukuze uthathe umphumela omkhulu wokubulala amagciwane, ubude beza beza bokukhanya kwe-UV bugcinwa ku-254nm.
Ukuklama okulula ukukuhlanza
Inqubo yokuhlanza yenziwa ibe lula kakhulu igumbi langaphakathi le-Heal Force eliyingqayizivele, elingenamthungo, elidonsa ngokujulile, elinciphisa noma yiziphi izindawo lapho ukungcola kunganqwabelana khona.Ama-incubator we-Heal Force anikezela ngesilinganiso esingcono kakhulu sokusebenziseka kwendawo ukuya kuvolumu ngenxa yokungabikho okuphelele kwanoma yikuphi ukufakwa okwengeziwe ekamelweni elingaphakathi.
Isihlungi sokungena sokunikezwa kwe-CO2
Yonke imigqa yokujova igesi ihlungwa ngesihlungi se-HEPA ukuze kukhishwe ukungcola nokungcola ngaphambi kokujovwa ekamelweni.Isihlungi se-HEPA siyakwazi ukuhlunga izinhlayiya ezinkulu kuno-0.3μm ku-99.998%.
Ayina-condensation ngokuphelele, ngisho nasezingeni eliphezulu lomswakamo womoya
Umswakama ophezulu womoya uvimbela amasiko amaseli ukuthi ome futhi agcine i-osmolarity ingashintshi endaweni yamasiko.Ngama-incubator ethu e-CO2, ungasebenzisa umswakama womoya kuze kufike ku-95% kuyilapho izindonga zangaphakathi zihlala zomile ngokuphelele ( Ukuze uvimbele ukungcola, noma kunjalo, akukho ukufiphala okufanele kwenzeke).Isistimu yereservoir yamanzi enelungelo lobunikazi igcina umswakama womoya uzinze ngokuphelele.
Ukulawula izinga lokushisa eliphezulu
Isistimu yokushisa enejakhethi yomoya ethembekile ehlanganiswe nezinzwa zokushisa ze-PT1000 iqinisekisa ukunemba okuphezulu nokusabalalisa ukushisa okulinganayo ngaphakathi.Amandla avelele aqinisekisa izikhathi ezimfushane zokululama futhi alinganise noma yikuphi ukuguquguquka okubangelwa ukuvuleka komnyango kuma-incubator we-Heal Force CO2.Lokhu kunikeza ukuvikeleka okuthembekile nganoma yisiphi isikhathi, ikakhulukazi kumasiko azwelayo.
■ Ihitha enkulu inikeza ukulawula izinga lokushisa okunembile.
■ I-heater engezansi ifudumeza amanzi acwengekile futhi iqinisekisa umswakama wegumbi.
■ Ihitha yomnyango wangaphandle ivimbela ukujiya komnyango ongaphakathi futhi yenza kube lula ukushesha ukushesha kwezinga lokushisa ngemva kokuvuleka kweminyango.
Ihlukaniswe, umnyango wengilazi yangaphakathi
Izicabha ezintathu zengilazi zangaphakathi (i-HF90) zigcina izimo zezulu ezizinzile, zinciphisa noma yiziphi izinguquko kumswakama, ukushisa nokugxila kwegesi, zifinyeze izikhathi zokululama kakhulu futhi ziphinde zinciphise ingozi yokungcola.Izicabha namashalofu engilazi anosayizi abayisithupha abavalwe ngaphakathi kuyakhethwa kumodeli HF240.Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuthi abasebenzisi abambalwa basebenze ngemishini efanayo.
Umsebenzi wokuqalisa ngokuzenzakalelayo
Umsebenzi wokuqalisa okuzenzakalelayo, okwenza lula ukusebenza kwemishini, uqukethe ukuqalisa okuzenzakalelayo kwe-incubator kanye nokulinganiswa kwesistimu yokulinganisa.I-Thermal Conductivity CO2inzwa inesisekelo sayo sokusetha kabusha ngokuzenzakalelayo ngaphandle kokulungiswa mathupha.I-incubator ingalayishwa ngokushesha ngemva kokuqedwa komsebenzi wokuqalisa.
Thayipha 304, isibuko finish, insimbi engagqwali
Electrolyzed galvanization steel, powder camera
3 iminyango yangaphakathi ejwayelekile
6 iminyango emincane yangaphakathi ngokuzithandela
indinganiso eyodwa yomnyango wangaphakathi
Ukushisa Okuqondile Nejakhethi Lomoya (DHA)
5℃ ngaphezu kwezinga lokushisa le-ambient ukuya ku-50℃
Isistimu yokulawula ye-CO2
0 kuya ku-20%
Ichibi elikhethekile elakhelwe amanzi
Umthamo wenqolobane yamanzi
0.3μm, Ukusebenza kahle:99.998% (ye-CO2)
Oxhumana nabo be-alamu yesilawuli kude
90 ℃ ukushisa okumanzi kokubulala amagciwane
110V/60Hz (Uma uthanda)
Ukuphazamiseka kwamandla * Izinga lokushisa eliphezulu/eliphansi * Ukuchezuka kwe-CO2 * RH * I-ajar yomnyango * Ukuvikela ukushisa okuzimele
Okwedlule: I-Smart Plus, umshini wamanzi ahlanzekile
Olandelayo: I-Heal force Tri-Gas Incubator
CO2 Incubator 50L,CO2 Incubator for Cell Culture,CO2 Incubator Biobase,Lab CO2 Incubator
I-CO₂ Incubator enejakhethi yamanzi